Box Crack (Miracle,Z3X,Eagle Eye,Octopus) Portable (Just Run Loader as Admin) By Min Oaker - MPPG
Home / Uncategorised / Box Crack (Miracle,Z3X,Eagle Eye,Octopus) Portable (Just Run Loader as Admin) By Min Oaker
Box Crack (Miracle,Z3X,Eagle Eye,Octopus) Portable (Just Run Loader as Admin) By Min Oaker
minokekar July 19, 2016	Uncategorised 7,792 Views
Hello.. မင်္ဂလာပါ ညီအကိုတို့
ဒီတစ်ခါတော့ ကျနော် Service လုပ်နေတဲ့ညီအကိုတွေ အတွက် လက်ဆောင် တစ်ခုပေးလိုပါတယ်..
Firmware Backup ထုတ်တာတွေ, IMEI ပြသနာတွေ , Lock ပြသနာတွေကို သူလည်းသူ့လောက်သူ
ဖြေရှင်းပေးနိုင်နေတဲ့ Box Crack လေးတွေပါ..
ခုကျနော်ပေးထားတဲ့ Box Crack တွေက Portable လေးတွေပါ.. ( install လုပ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး.
တစ်ခါတည်း ဖွင့်ပီး သုံးရုံပါပဲ)
Beginer တွေ အတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေမှာပါ.. (တစ်ချို့တွေက သုံးလည်း သုံးချင်တယ်. online မှာကလည်း အသုံးပြုနည်းဆိုတာပဲ တွေ့တယ်. install လုပ်နည်း မပါတာမျိုး ပေါ့)
တစ်ခုပဲ လုပ်ပေးရမှာပါ ဘာလဲ ဆိုတော့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ပါ –
* Anti Virus ကို ပိတ်ထားပေးပါ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ် *
Zip ဖြည်လိုက်ပါ . ပီးရင် Loader .exe ဖိုင် ကို right Click >>> Run As Admin နဲ့သာ Run ပေးလိုက်ပါ
သုံးလို့ ပီးသွားရင် ဖြည်ချထားတဲ့ ဖိုင်ကို ဖျက်လိုက်ပေါ့ . zip ကိုတော့ထားထားပေါ့
ဒါဆို Virus ရန်လည်း ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလေ..
နောက်တစ်ခုက Miracle မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ Start Bottom မှိန်နေတဲ့
အကုန် စမ်းသပ်ပီးသားပါ .. 100% အာမခံပါတယ် .. Antivirus ကိုပိတ်ပီး Run As Admin နဲ့ သာ လုပ်ပေးလိုက်ပါ
Download Miracle Box Crack V2.27A (Portable)
http://sh.st/KhicE – 85.4 MB
Download Z3x SamsungTool Pro Crack V24.3 (Portable)
http://sh.st/Khp0O – 41.5 MB
Download Miracle Eagle Eye Crack V2.27A (Portable)
http://pc.cd/iVVctalK – 84.9 MB
Download Octopus Box Crack V1.6.5 (Portable)
http://sh.st/KhsgA – 83.5 MB
Previous Xiaomi Flash Miflash (Beta)
Next FREE ALL FILES ON SAMFIRM.NET UPLOAD TODAY – 06/06/2016 !!! Roms full, PIT files, full Firmwares for Samsung devices: Galaxy S7, S7 edge, Note 5, Note 4, S6, S6e+, A7, A8, A9, Android 6.0.1, T-Mobille, Verzion, ATT, AU, BTU, XXV,